विकास भन्ने कुरा कुनै जादुको छडी होइन
As of Fri, 15 Feb, 2019 20:50
विराटनगर महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । देशको ऐतिहासिक नगरी भएर पनि विकासमा पछि परेको विराटनगरमा पछिल्लो समय एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सडक, नाला र ढल निर्माण भइरहेको छ । दुई वर्षभित्र निर्माणाधीन सबै सडकमा ढल र नालासहितको कालोपत्रे गरिसक्ने महानगर प्रमुख भीम पराजुली बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित पराजुली महानगरलाई भ्रष्टाचाररहित बनाउने अठोटका साथ अगाडि बढिरहेका छन् । नेविसंघबाट राजनीति सुरु गरेका पराजुली महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा ‘बागी’ उम्मेदवार भएर स्ववियुको निर्वाचनमा विजयी भएका थिए । विराटनगर कांग्रेसको दुई पटक सभापति भइसकेका पराजुली शून्य सहनशीलतामा काम गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको दाबी गर्छन् । महानगरमा आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र कसैले भ्रष्टाचार गरे तत्काल कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ । गुणस्तरहीन काम गरेको पाइए तत्काल ठेक्का रद्द गर्ने प्रमुख पराजुलीले बताए । जनताको सुखदुःख आफू सधैं हुने उनी बताउँछन् । विकासमा समाहित हुन पराजुली सम्पूर्ण महानगरवासीलाई आग्रहसमेत गर्छन् । भावी सन्ततिले गर्व गर्न लायक विराटनगर बनाएर छाड्ने उद्घोष गर्ने प्रमुख पराजुलीसँग विराटनगरको विकास–निर्माण, भावी योजना, कर वृद्धिपछि उत्पन्न समस्यालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारका प्रदेश–१ का संयोजक मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानीको सार :
विकास त एकदमै सुस्त रूपमा भइरहेको नि विराटनगरमा, जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पनि विकास किन सुस्त ?
विकासमा सुस्तता भन्न मिल्दैन । विराटनगरमा विकासका काम द्रुत गतिमा भएका छन् । महानगरका १९ वटै वडामा हेर्नुहुन्छ भने अधिकांश ठाउँमा काम भइरहेको छ । जनप्रतिनिधि आउनु अगाडिचाहिं बरु काममा ढिलासुस्ती भएको थियो । जनप्रतिनिधि आएपछि धेरै काम समयमै सम्पन्न भएका उदाहरण म धेरै दिन सक्छु । विकासको नामलाई महानगरले तीव्रता दिएको छ । निर्माणाधीन सडकलाई तोकिएकै मितिभित्र सक्नुपर्छ भनेर ठेकेदार कम्पनीहरूलाई दबाब दिने, अनुगमन गर्ने काम गरिरहेका छौं । एकैचोटि महानगरका सबैजसो वडामा सडक विस्तार, ढल र नाला निर्माण भइरहेकाले पनि यस्तो देखिएको हो । विकासको कामबाट हामी जनप्रतिनिधि सन्तुष्ट छौं ।
विराटनगरलाई सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार गर्न नदिने र आफू पनि नगर्ने भनेर काम गरिरहेको छु ।
कार्यभार सम्हाल्नुभएको एक वर्ष बितिसकेको छ, यो एक वर्षको अवधिमा के गर्नुभयो ?
वास्तवमा धेरै काम भएका छन् । मैले शपथग्रहणकै दिनबाट सुशासन नै समृद्धिको आधार हो भन्ने मान्यता राखेर पहिला आफूबाट काम सुरु गरेको छु । विराटनगरलाई सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार गर्न नदिने र आफू पनि नगर्ने भनेर काम गरिरहेको छु । मैले एक वर्षको तलबभत्ता पनि लिएको छैन । यो रकमलाई विपन्न समुदायले पढ्ने कमजोर अवस्थाको सामुदायिक विद्यालयलाई दिने घोषण गरिसकेको छु । शपथग्रहणकै समयमा घोषणा गरेका कार्यक्रमअन्तर्गत मैले खाल्डाखुल्डी पुर्ने, मोतियाबिन्दुको निःशुल्क अप्रेसन गर्ने, पहिलो सन्तान छोरी जन्माउनेलाई प्रोत्साहन भत्ता साथै छोरी बचाऔं छोरी पढाऔं अभियानलगायतका काम भएका छन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका काम गरेका थियौं ।
पुरानै कामको मात्रै निरन्तरता भइरहेको छ, जनप्रतिनिधि आएपछि नयाँ कामको थालनी भएन भन्छन् नि महानगरवासी ?
बिल्कुलै होइन । नयाँ काम धेरै भएका छन्, धेरै छनोट भएका छन् भने कति बन्ने चरणमा पुगेका छन् । अर्को कुरा नयाँ–पुराना भन्ने कुरै आउँदैन । जे आज बन्छ ती नयाँ काम हुन् । हामी आउँदा हाम्रा माझ भत्केको विराटनगर थियो । आज हामीले यसलाई अधिकतम सुधार गर्ने काम गरिसकेका छौं । अहिले विराटनगरले विकासको फड्को मार्दैछ । विराटनगरका जनताको चाहनाले म विजयी भएको हँु । यहाँका जनताको भावनाअनुरूप काम गर्ने हो । काम नयाँ र पुरानो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । महानगरपालिकाले आफ्ना कामहरू एडीबी, सहरी सघन र अन्य परियोजनाहरूअन्तर्गत काम भइरहेको छ । सहरी एकीकृत वातावरणीय सुधार परियोजनाको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसको ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । हामी आएपछि आरयूडीपी प्रोजेक्ट सुरु गरेका छौं, सहरी संघन कार्यक्रम ।
पाँचवर्षे कार्यकालमा विराटनगरवासीको सपना पूरा गर्नेमा म आशावादी छु । महानगरवासीले गर्व गर्ने विराटनगर बनाउनेछु ।
यो एक वर्षको अवधिमा विराटनगरवासीले तपार्इंलाई दीर्घकालसम्म सम्झन लायक के काम गर्नुभयो ?
यस एक वर्षको अवधिमा सम्झनलायक र दीर्घकालसम्म सम्झने कार्यहरू धेरै भएका छन् । यद्यपि विराटनगर–१९ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभागृह बनाउने कामका लागि ५ बिघा जग्गा स्थानीयको सहभागितामा लिएर डीपीआर गर्ने काम भएको छ । विराटनगर बसपार्क सम्पन्न भएको छ । तारिणीप्रसाद कोइराला सञ्चारग्राम बन्ने क्रममा छ । यस्तै गुरुकुलमा सुशील कोइराला नाटकघर बन्दैछ, प्रदेशस्तरको बसपार्क बनाउन विश्व बैंकको लगानीमा मेगा सिटी प्रोजेक्टअन्तर्गत बूढीगंगा गाउँपालिकामा डीपीआरको काम सम्पन्न गरेको छ । यहाँको नहरलाई वैकल्पिक सडकका रूपमा विकास गर्ने क्रममा छौं । ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा विराटनगर–३ मा भ्यू टावरको डीपीआर सुरु भएको छ । त्यसका लागि लगभग ५० करोडको लागत अनुमान गरेका छौं । विराटनगर–५ मा वल्र्ड बैंक मेगा सिटीअन्तर्गत आधुनिक पार्क बनाउने तयारी गरिरहेका छाैँ, जुन ५ बिघा ७ कठ्ठामा बन्नेछ । यस्तै महत्वपूर्ण योजना विराटराजाको दरबार हो । त्यसको संयोजक उद्योगी सुरेन्द्र गोल्छालाई बनाएका छाैँ । त्यसको डीपीआरका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएका छौं, जसलाई सम्पन्न गर्न १ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेका छौं । दुईवटा वडामा १५–१५ बेडको अस्पताल बनाउन २–२ करोड छुट्ट्याएका छौं । उत्तरी क्षेत्रको १९ नम्बर वडा र दक्षिणतिरको १५ नम्बर वडामा काम भइरहेको छ । विकास भन्ने कुरा कुनै जादुको छडी होइन, एक वर्षमा खराखर बन्ने । हामीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गरेका छाैँ । अब हामीसँग चार वर्षको समय छ । यो पाँचवर्षे कार्यकालमा विराटनगरवासीको सपना पूरा गर्नेमा म आशावादी छु । महानगरवासीले गर्व गर्ने विराटनगर बनाउनेछु ।
निश्चित कार्ययोजनाबिनै काम गरेको देखिन्छ । भन्दिनुहोस् न, अबको एक वर्षभित्र र पूरै तपाईंको कार्यकालभरि कस्तो हुनेछ विराटनगर ?
मैले माथि पनि भनें । विकास कुनै पनि जादुको छडी हुँदै होइन । तर, केचाहिँ हो भने नेतृत्वले इमानदार बनेर काम गर्ने हो भने साँच्चिकै त्यस ठाउँका जनताले सुख पाउँछन् । कार्ययोजनाबिना काम गर्ने भन्ने कुरा पनि गलत हो । त्यस्तो त संसारका कुनै सरकारी संयन्त्रमा हुदैन । मैले एक वर्ष मात्र होइन, बाँकी रहेको पूरा चार वर्षको समयमा विराटनगर देशले गौरव गर्ने विकसित सहर उपहार दिएर पूरा गर्नेछु ।
विराटनगरवासीमा त घोर निराशा देखिन्छ नि विकासलाई लिएर । जताततै खाल्डाखुल्डी, पानी पर्दा हिलो, नपर्दा धूलोका कारण सास्ती पनि भोग्नुपरेको छ ?
विकास भनेकै संक्रमणको समय हो । तपाईं आफ्नै घर बनाउनुहोस् न । नबनेसम्म कति सास्ती हुन्छ ? यसलाई पनि मेरो घर बन्दैछ, मेरो सहर बन्दैछ भन्नुपर्यो नि ! मलाई पनि चिन्ता छ, सकेसम्म छिटो जनतालाई सहज बनाउन चारैतिर पिच बाटो होस्, जनता मेरो कामप्रति खुसी भएर हिंडून् । कुरा के हो भने काम भइरहेको छ, हुन्छ, चाँडै जनताले राहत पाउनेमा म विश्वस्त छु । यस्तै महानगरभित्र ४ सय किलोमिटर पिच बनाउने योजना छ ।
म इमानदारिताको मूल्यांकन कहिले हुन्छ भन्ने पर्खाइमा छु । राम्रो काम गर्दागर्दै नराम्रा कुरा आउँदा चित्त दुख्दो रहेछ ।
तपाईं शून्य सहनशीलताको कुरा गर्नुहुन्छ, आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई नि गर्न दिन्न भन्नुहुन्छ, तर महानगरभित्र त आर्थिक अनियमितताको समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ नि, के हो कुरा एउटा कामचाहिं अर्कै भइरहेको हो ?
हो, म इमानदारिताको मूल्यांकन कहिले हुन्छ भन्ने पर्खाइमा छु । राम्रो काम गर्दागर्दै नराम्रा कुरा आउँदा चित्त दुख्दो रहेछ । केही कुरा केही सञ्चारमाध्यममा आयो, तर के त्यो कुरा सत्य हो त ? अहिले पनि म भन्छु, कहींकतैबाट त्यस्तो कमजोरी भएको छ भने म तत्काल कारबाही गर्न तयार छु । यदि मैले त्यसो गरेको ठहरिए म तत्काल राजीनामा दिन्छु । नेतृत्व इमानदार बन्दा मात्रै पनि समाज रूपान्तरणमा सहजता आउँछ भन्ने मेरो सोचाइ हो । म इमानदारिताको जगबाट काम गरिरहेको छु । केही कमी–कमजोरी भए औंल्याएर मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् । म आभारी हुन्छु ।
अनि टेन्डरबिनै कोटेसनका भरमा काम भइरहेको छ रे नि, किन यस्तो ?
त्यस्तो होइन, महानगरले कुनै पनि काम नियम र विधिलाई मिचेर गरेको छैन । जति पनि काम गरेको छ, नियमसंगत गरेको छ । राज्यले दिएको विधि–विधानअनुसार काम गरेको छ । नियम र विधि पुराएर जो आयो, कोटेसनमा उसैलाई दिइएको छ । स्थानीय तह सञ्चालनमा आएको नियम र विधिलाई अक्षरशः पालना गरेको छ महानगरले । वडाबाट सिफारिस भएर आएकालाई महानगरले कोटेसन स्वीकृत गर्ने काम गरेको छ । कोही कसैले गलत गरेको भए म तत्काल कारबाही गर्न तयार छु । जहाँसम्म मलाई लाग्छ, महानगरमा विधि र विधानअनुसार नै काम भइरहेको छ । जुन उपभोक्ताले गर्न नसकेको काम र अत्यावश्यक काममा वडाबाट सिफारिस भएर आएकोलाई मात्रै कोटेसन दिइएको छ ।
आफू निकटका व्यक्तिलाई कोटेसनकै आधारमा ठेक्का दिनुभएको छ रे, नेतृत्वमा बस्नेले कानुन र नियम मान्नु पर्दैन ?
विराटनगरका सबै जनता आफ्नै हुन् । आफ्ना मान्छे कसलाई भन्ने ? महानगरभित्र बसोबास गर्ने सबै जनता मेरो आफ्ना हुन् । मैले घरभित्रको मान्छेलाई ठेक्का दिएको छु र ? जसले प्रक्रिया पूरा गरेर आएको छ, उसैलाई ठेक्का दिने हो । कसैको मुख हेरेर ठेक्का दिने कुरा आउँदैन ।
विराटनगरका सबैजसो वडा यतिबेला पोलमा बत्ती नहुँदा अन्धकार भएका छन् । जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पनि किन यस्तो ?
हो, अहिले धेरैजसो पोलमा बत्ती छैन । यसको एउटै कारण, भएका बत्तीको फ्युज गएर हो । हुरी–बतासका साथै पानी परेर बत्तीहरू बिग्रिएका छन् । अब पोलमा बत्ती हाल्ने अधिकार वडालाई दिइएको छ । विगतमा बिजुली बत्तीका लागि एकदमै पैसा कम छुट्याइने गरिएको रहेछ, जसका कारण बत्ती बिग्रियो भने लामै समय लगाउन सकिएन । रकमान्तर गरेर भए पनि बत्ती लगायौं विगतमा । अबचाहिं वडालाई नै बत्तीको अधिकार दिइएको छ । यो समस्या अब छिट्टै समाधान हुन्छ ।
हामी सीमित स्रोतसाधनमा चल्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यो हाम्रा लागि चुनौती छ ।
विराटनगरको खानेपानी समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
विराटनगरमा खानेपानीको पनि समस्या छ । त्यसका लागि जाइकासँग लबिङ गरिरहेका छौं । एक घर एक धारा अवधारणाअनुसार काम गरिरहेका छाैँ । यसका लागि दातृ निकायसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं । विराटनगरमा ५६ वर्ष पुराना खानेपानीका पाइप छन् । केही ठाउँमा एडीबीको कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ पाइप फेरेका पनि छौं । धेरै ठाउँमा फेर्न बाँकी नै छ । हामी सीमित स्रोतसाधनमा चल्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यो हाम्रा लागि चुनौती छ । महानगरवासीलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउन हामी तत्पर छौं । केही वर्षभित्रै समस्या समाधान हुन्छ ।
विराटनगरको इतिहास, परम्परा र योगदानलाई केन्द्र सरकारले लत्याउने काम गरेको छ । यसको हामीले विरोध पनि गरिरहेका छौं ।
संघीय सरकारले विराटनगर महानगरपालिकालाई बजेट किन कम छुट्ट्याएछ ? के तपाईंको लबिङ नपुगेको हो ?
विराटनगरको योगदान राजनीतिक र आर्थिक रूपमा निकै उच्च छ । तर, विराटनगरलाई अन्य महानगरभन्दा १ अर्ब बजेट कम गरेको छ । यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो । राज्यले हामीलाई हेपेजस्तो महसुस गरेका छौं । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा सचिवदेखि सांसदज्यूहरूसम्मलाई कुरा राखेका छौं । आवश्यक पहल गरिदिन पनि अनुरोध गरिरहेका छौं । विराटनगर उपमहानगरपालिका भनेर बजेट दिएको रहेछ । सबैले कुरा राखेपछि नामचाहिं महानगरपालिका तर बजेटचाहिं उपमहानगरपालिकाको छुट्ट्याएको रहेछ । यसको हामीले विरोध गरिरहेका छौं । यो कुनै पनि हालतमा सच्चिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । किनभने त्यहाँ जे डाटा छ त्यो डाटा गलत छ । त्यसलाई सच्याइनुपर्छ । त्यो उपमहानगरपालिकाको डाटा राखेर महानगरपालिकामा कम बजेट हालेको देखिएको छ । विराटनगरको इतिहास, परम्परा र योगदानलाई केन्द्र सरकारले लत्याउने काम गरेको छ । यसको हामीले विरोध पनि गरिरहेका छौं । जुन आधारमा संघीय सरकारले बजेट वित्तीय समानीकरण अनुकरणका छुट्याएको छ, त्यो एकदमै न्यून छ । वित्तीय आयोगले जुन इन्डिकेटरका आधारमा बजेट छुट्याएको छ, त्यो गलत छ । तथ्यांक नै गलत छ । केन्द्र सरकारले विराटनगरलाई हेपेको महसुस गरेका छौं । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वय नभएसम्म संघीयता सफल हुन सक्दैन । संघीय सरकारलाई महानगर अनुरोध गर्न चाहन्छ कि महानगरलाई होच्याउने काम नगरियोस् अबका दिनमा ।
विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउन सकिन्छ । हामीसँग पर्याप्त पूर्वाधार छन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर पार्टीका अध्यक्ष सबैलाई भेटेर कुरा राखेका छौं ।
विराटनगर अस्थायी राजधानी त भयो, स्थायी बनाउन महानगरले के गर्दैछ पहल ?
विराटनगरको जुन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र ऐतिहासिक गौरव छ त्यसलाई कायम गर्न पनि हामीले पूर्वाधारमा सुधार गर्नुपर्नेछ । विराटनगर अस्थायी राजधानी हो । अस्थायी बनाउन पनि हामीले धेरै मेहनत गरेका छौं । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पार्टीका अध्यक्ष, सांसद, उद्योगी व्यवसायीहरूसँग लामै छलफल गरेका थियौं । अब स्थायी राजधानी बनाउन पनि हामी लागिपरेका छौं । विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउन सकिन्छ । हामीसँग पर्याप्त पूर्वाधार छन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर पार्टीका अध्यक्ष सबैलाई भेटेर कुरा राखेका छौं । सबै मन्त्रालय एकै ठाउँमा राख्ने गरी लेन्डपोलिन प्रक्रियाबाट १ हजार बिघा जग्गाको व्यवस्था गर्दैछौं । स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने जग्गासहित भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउन महानगर प्रतिबद्ध छ । स्थायी राजधानीकै लागि विराटनगर–१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभागृह बनाउँदैछौं । त्यसका लागि ५ बिघा जमिन लिइसकेका छौं । त्यो हाम्रो ड्रिम प्रोजेक्ट हो । २५ सय जना अट्न सक्ने सभागृहमा भोलि राजधानी हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम गर्न सक्छौं । त्यो हाम्रो प्रथमिकतामा छ ।
विराटनगरमा पनि मनोरेलको कुरा आइराखेको छ । खास के हो ?
मनोरेल महानगरको योजना होइन । कुनै प्राइभेट संस्थाले पीपी मोडलमा जाऊ हामी बजेट ल्याउँछौं भनेकाले आएको हो । कसैले बजेट ल्याउँछ भने किन नगर्ने । यो हाम्रै फाइदाका लागि हो । संस्थाले यहाँबाट स्वीकृति चाहेको हो । मनोरेल आउँछ भने किन सहयोग नगर्ने । हामी पनि हाम्रो तर्फबाट सक्ने जति गर्छौं । निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा पनि विकास–निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं ।
काम गर्न चनौती कत्तिको छ ?
चुनौतीहरू थुप्रै छन् । चुनौती स्वाभाविक रूपमा हुन्छ नै, तर अहिले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि कहीं पनि त्यस्तो समस्या छैन । घोघामा बाटो बनाउँदा जग्गावालाले लगभग ३ करोड पर्ने जग्गै उपलब्ध गराइदिनुभयो । त्यस कारण यो हाम्रा लागि उपलब्धि हो । हामीले नागरिक समाजसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेका छौं । काममा बाधा हुने गरी चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छैन ।
महानगरमा जनप्रतिनिधिभन्दा कर्मचारी बढी हाबी भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ, त्यस्तै हो ?
राजनीतिक परिवर्तन सँगैसँगै कर्मचारीको मनस्थिति र सोचमा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ अब । केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारसँग नसोधी कर्मचारी पठाउँदा समस्या भएको छ । दलीय आस्थाका आधारमा भन्दा पनि योग्यता र क्षमताका आधारमा पठाउनुपर्छ । हामी स्थानीय सरकार भएकाले कर्मचारीले जथाभावी गर्छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ । यदि जनप्रतिनिधिको काममा कोही कर्मचारी तगारो बन्छ भने आवश्यक परे बोर्डबाट निर्णय गरेर हाजिर गर्न नदिने मात्रै होइन, फिर्तासमेत पठाउन हामी पछि पर्दैनौं । म त नैतिकता र इमानदारिताको जगमा काम गरेको मान्छे हुँ । आफूमा स्वार्थ भएन भने काम गर्न कहीं पनि समस्या हुँदैन । मैले इमानदारीपूर्वक भनेको छु, हिजो के हुन्थ्यो, थाहा छैन । अब कुनै पनि किसिमको अनियमितता र गलत काम कसैले ग¥यो भने म कारबाही गर्छु । यो कुरा मैले प्रस्ट भनेको छु । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्छौं । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई विदेश पनि पठाएका छौं । नराम्रो काम गर्नेलाई हामी कारबाही गर्छौं । यसमा हाम्रो कुनै पनि कम्प्रोमाइज हुँदैन । म आफू जानेर कुनै गल्ती गर्दिनँ । अञ्जानमा कुनै गल्ती भएछ भने त्यसलाई सच्याउँछु ।
चुरे कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र सुधार आवश्यक
वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका आधार
ओली सरकारको एक वर्ष ‘कुरामा नम्बर वान, काममा जिरो’ : डा. महत
एनआरएनएको गम्भीर ध्यानाकर्षण
नेपालको एसएमईको विकासमा ओइसीडी सहयोग अपेक्षा
नेपालमै गोली उत्पादन गर्ने प्रस्ताव भारतद्वारा अस्वीकार
बालक बलात्कारी पुरुषलाई सार्वजनिक स्थलमै गोली ठोकियो
दूध बेचेरै मासिक २२ लाख आम्दानी
कपाल काट्नका लागि पालो कुर्दै बिल गेट्स